Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela - imihlinzo
Namhlanje kwiMihlinzo – sithini iSkeem seBEE…
Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela
Lombhali udume ngokulwa yonke into edibene namadoda, kanga ngento yokuba kulo mjikelo ubhala incwadi enenjongo yoku bonisa ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda nengxaki zehlabathi zingacutheka. Kodwa ke usayi bhala lencwadi yakhe.
Amapolisa avale irestaurant emveni kokuba efumene iintloko ezimbini zabantu
Kwidolphu ethile eNigeria, amapolisa aye abamba abantu abayi 11 emveni kokuba aye achazelwa ngale ndawo. Kufumaniseke ukuba kule restaurant kuthengiswa amalungu omzimba abantu. Amapolisa kwelo phulo lawo aye afumana zambini intloko zabantu kwakunye nemibhaxa yemipu. Kuthiwa ke phofu lendawo izoku qatshelwa ngomnye umfundisi owaye zokutya kule restaurant, wothuka waphantse wokuwa xa kubuya ibill. Xa ebuza kwenzeke njani ibeyi lemali, impendulo yathi okukutya ebekutya ibiyinyama yomntu.
Isuke yathanda ukuxhaphaka lento yamadoda abaleka abantu babo
Kukho ibali lomntu okhe wazenza ingathi uswelekile kwezi veki zidlulileyo, kuba ebebaleka umtshato. Kulo mjikelo kukho mfo othile wase London oye wabanjwa ngamapolisa ngenxa yokuchitha ixesha lawo. Lomfo uye wafowunela iqabane lakhe wathi ubanjiwe ngaphandle kwemvume yakhe, kanga ngento yokuba baya kumkhulula ngos’ke abhatale i£50. Intombi leyo yakhe ayikhange ibesa jikeleza, yafowunela amapolisa. Kuzo kuvakala ethubeni ukuba lomfo eyonanto yenzekileyo ebefuna ukuhlala kule party ebekuyo esonqena ukugoduka kwa ngethuba.
Oogqirha bachazele mfo othile ukuba uAllergic kwinyama ebomvu emveni kokuba eyewatyiwa sisinambuzane
Lomfo wase Oklahoma emveni kokuba ebekhe wazikhupha beye kwiCamp uyewatyiwa sisinambuzane angasaziyo. Uzokuyi qaphela lento xa egqibo kutya iburger, uye waphuma amaqhakuva erhawuzelela kakhulu, ebila nokubila engakwazi nokuphefumla nomqala wavaleka. Ekuyeni kwakhe kwagqirha baye bamchazela ukuba uneAllergy kwinyama ebomvu ngenxa yesi sinambuzane esimtyileyo. Baye bacebisa ayiyeke inyama ebomvu, nangona enengxaki nokohlukana nayo ke phofu.
SakhiMan…ufika kowabo ebuya esikolweni, iyile mini kuvalwa ngayo izikolo. Ingwenya ifika neReport sele eyiqhaqhile. Xa efika njalo umama wakhe uyambuza ukuba uqhube njani kwimviwo? Sakhza athi, yazi ukuba mama ndifumene 100% kulo mjikelo. Yhu, umama wakhe akhuze, esithi ubani wena ufumane u100%? Ikhuze yona kuqala ingwenya ukuba, nyani mama ndiwu xhomile umgangatho kulo mjikelo. Umama wakhe aqonde ufuna ukuzi bonela. Xa esithi, tyhini ufumene 20% kwiBiology, 20% kwiAgriculture, 20% kwiSocial Science, kwiHistory ufumene 40%…kanti yinkazathi ka100% 🙂 Yeeey!
‹ Imihlinzo: amaChina aphindile	› Imihlinzo: Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti